समाज Archives - E mechi
भनिन्छ नि, ‘चालिसे लागेछ बैस जागेछ ।’ यो उखान पहिलेको बुडापाकाहरुले भन्ने गरेका हुन् । बुडापाकाका अनुसार जीवनमा पहिलो १६ वर्ष र दोस्रो ४० वर्षमा गरी २ पटक बैस जाग्छ रे । हाम्रो समाजमा कहिकतै महिलाहरु ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहेको घटनाहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । विवाह पश्चात मानिसहरु वैदेशिक रोजगारी, पश्चिमा रहनसहन जस्ता विभिन्न कारण श्रीमान–श्रीमती एक अर्काप्रति चासो नदेखाउने, एक अर्काको भावनाको कदर नगर्ने जस्ता समस्याले अन्ततः कतिपयको सम्बन्ध विच्छेद पनि भएको छ । विवाह पछि सम्बन्ध बनाउन पुरुषवादी समाजमा पुरुष नै हाबी भएतापनि एक अध्ययनले महिला पनि विवाहवेत्तर सम्बन्ध राख्न चाहान्छन् भन्ने देखाएको छ । अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार ४० वर्ष कटेका महिलाको ठूलो संख्या बिवाह पछि पनि सम्बन्धमा रहन्छन् । एक अध्ययनले देखाए अनुसार ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहनुका विविध कारणहरु
Apr252019 by Editorial DepartmentNo Comments
रिना बस्नेतको हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै पथरीमा प्रदर्शन भैरहेको बेला धरानबाट फेरी एक युवती बेपत्ता भएकी छिन् आइतबार बिहान धरान जान्छु भनी घरबाट हिंडेकी केराबारी–५ की २५ वर्षीया युवती रोजिता दाहाल बेपत्ता भएकी हुन् ।बुहारी बेपत्ता भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटामा सासु–सुसरा पुगेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाको प्रहरी टोलीले खोजतलासलाई तीब्रता दिएको थियो ।बेपत्ता युवतीले धनकुटाको मूलघाटमा रहेको पुलमुनि आफ्नो झोला, मोबाइल र पैसा समेत तमोर नदीको किनारमा छाडेको म्यासेज श्रीमान्को मोबाइलमा पठाएको र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाको प्रहरी टोली पुग्दा जुन ठाउँमा भनेको सोही ठाउँमा सामग्री (ब्याग झोला, पैसा र मोबाइल) फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी सुरेन्द्रबहादुर गुरूङले जानकारी दिए । ‘सासु–ससुरा नै आएर यहाँ मौखिक जानकारी दिएपछि हामी सबै तीब्रताका साथ खोजतलासमा लाग्यौं’,
इटहरी– ‘मलाई माफ गर्नुस् आमा मैले गल्ती गरेँ। मैले नगर्ने काम गरेछु। धर्म परिवर्तन गरेर भुल गरेँ, मलाई माफ गर्नुस्।’ आमालाई अँगालो हाल्दै चिच्याउँदै थिए, अभिषेक कार्की। आमाको मनको बाँध पनि भत्कियो। ‘यिनै क्रिस्चियनले गर्दा मेरो सम्पत्ति सकियो। मलाई सुकुम्बासी बनाउने यिनै हुन्,’ उनी पनि रुन थालिन्।नजिकै रहेकी बुहारी आयुशाले उनलाई सम्हाल्ने कोसिस त गरिन्। तर, सकिनन्। बरु आफै रोइकराइ गर्न थालिन्। ‘मलाई क्युरेट गर्न लगाउने यिनै पापी हुन्,’ उनी भक्का निँदै भन्न थालिन्, ‘मेरो बच्चा जन्मिँदा मलाई हेला गर्ने यिनीहरु नै हुन्।’ वरिपरिको भिड उनीहरुतिरै केन्द्रित भयो। कसैले कसैसँग बोल्न सकेनन्। बरु धेरैका आँखा रसाए। घटना बैसाख ९ गते सोमबारको हो। इलाका प्रहरी कार्यलय इटहरी अगाडिको दृश्य। अत्यन्तै दर्दनाक पीडा पोखिएको भान हुने यो दृश्यको कारण रहेछ, इसाइ ध र्म परिवर्तन।जसका मुख्य नाइके हुन्, कोरियाली
Posted in राष्ट्रिय समाचार, समाज
सप्तरी - सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाकी १६ वर्षीया बालिका गएको एक हप्तादेखि सम्पर्कविहीन छिन् । स्थानीय विष्णुदेव सरदारकी छोरी आरती कुमारी सरदार गएको चैत्र ३० गते देखि सम्पर्कमा आएकी छैनन् । उनका आफन्तजनले प्रहरी र नातेदारको सहयाेगमा उनकाे खाेजी गरिरहेका छन् । खोज्ने ठाँउ सबै चाहार्दा पनि कतै नभेटेपछि आरतीका बुबा विष्णुदेवले भन्नुभयोे, ‘घरबाट निस्केको यतिका दिन भयो, कसैको सम्पर्कमा पनि छैन । अब कहाँ जाउँ ?’ कठौना बजार कपडा किन्न जान्छु भनेर चैत्र ३० गते घरबाट साँझ ४ बजे गएकी बहिनी घर नफर्किएपछि घरमा चुलो बल्न छोडेको आरतीका दाजु कृष्ण कुमार सरदारले बताउनुभयो । उहाँले बहिनीको खोजीमा सहयोग गरिदिन सञ्चारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, प्रहरी प्रशासनलगायतलाई आग्रह गर्नुभएकाे छ ।
म्यासेजबाटै राष्ट्रपतिकी छोरीलाई यौन प्रस्ताव राख्ने यी बदमास को हुन ?
Posted in बिज्ञान प्रबिधि, समाज
तपाईले कसैलाई अश्लिल म्यासेज पठाउने बानी त बसाल्नु भएको छैन । छ भने सावधान । त्यस्ता म्यासेज म्यासेज रिडरले सार्वजनिक पनि गरिदिन सक्छन् है । जसको पछिल्लो उदाहरण बनेकी छिन् भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जकी छोरी शर्मिष्ठा मुखर्जी । शर्मिलाले सामाजिक सञ्जालमा आँफुलाई अश्लील म्यासेज पठाउने व्यक्तिको म्यासेज नै सार्वजनिक गरिदिए पनि भारतमा हंगामा नै मच्चिएको छ । पर्थ मण्डल नामक युवकले शर्मिलालाई पठाएको अश्लिल म्यासेज नै उनले बाहिर ल्याएपछि अहिले उनको कामको तारिफ गर्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । सुरुमा शर्मिलाले यस विषयमा मण्डललाई फेसबुकमा ब्लक गर्ने र अनफ्रेण्ड गर्ने सोचे पनि पछि उनले म्यासेज सार्वजनिक गर्दै उनी विरुद्ध दिल्ली प्रहरी अन्तर्गतको साइबर क्राइम विभागमा उजुरी दिँदै कडा भन्दा कडा कारवाहीको माग गरेकी छिन् ।
डीभी परेर अमेरिका भासिएका युवकको आरोप : श्रीमती र ससुरालीले सम्पत्ति हडपे
नेपाल आउँदा आइफोन पनि खोसेको दावी श्रवण देव ११ वैशाख, जनकपुरधाम । मधेसमा श्रीमान र परिवारबाट पीडित महिलाहरुको कथा त तपाईंले धेरै पढ्नुभएको होला । तर, एउटा ठीक उल्टो घटना सार्वजनिक भएको छ, जहाँ श्रीमानले श्रीमतीबाट पीडित बनेको गुनासो गरेका छन् । लामो समय अमेरिकामा बसेर सम्पत्ति आर्जन गरेका जनकपुरधामका एक युवक श्रीमतीका कारण आफू घर न घाटको भएको बताउँछन् । आफैं आर्जन गरेको सम्पत्ति मात्र होइन, जनकपुरमै रहेको पुर्ख्यौली सम्पत्ति पनि गुमाएको उनको भनाइ छ । अमेरिकामा बसे पनि आफ्नै जात र धर्मकी युवतीसँग विवाह गरेका थिए जनकपुरधाम ५ का विजय साहले । तर, उनै श्रीमतीले सबै सम्पत्ति गुट्मुट्याएर माइतीलाई दिएपछि आफ्नो विचल्ली भएको उनले बताए । ‘श्रीमतीलाई माया गरेर अमेरिका लगेँ, तर त्यहीँबाट उनले षड्यन्त्र रच्दै सारा सम्पत्ति हत्याइन्,’ विजयले पत्रकारहरुसँग भने । जनकपुरधामको दुई ठाउँमा रह
१४ वर्षमा बिहे, २४ मा सम्बन्धविच्छेद, भन्छिन ‘सानैमा बिहे गरेर ठूलो गल्ती गरेंछु !
जाजरकोट : नलगाड नगरपालिका–६ सिर्केकी विष्णु सिंह स्थानीय एक विद्यालयमा ९ कक्षामा पढ्दै थिइन्। त्यहीबेला नलगाड–८ का सुनिल सिंहसँग भेट भयो। चिनजान हुँदै जाँदा मायापिरती नै झाँगियो। केही समयको अन्तरालमै दुवैले सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाँदै लगनगाँठो कसे।यो १० वर्षअघिको कुरा हो, जतिबेला विष्णु १४ वर्षकी किशोरी थिइन्। १४ वर्षकै उमेरमा आमाबुवाकोे मन्जुरीबिनै प्रेमविवाह गरेका उनीहरूको दाम्पत्यजीवन केही वर्ष राम्रैसँग अघि बढ्यो। दुई छोरा पनि भए। तर एक दशकभन्दा बढी टिक्न सकेन उनीहरूको सम्बन्ध र प्रेम। सुनिलसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर विष्णु अहिले माइतीमै बस्दै आएकी छन्। दुई छोराको लालनपालनको जिम्मा पनि आफैंले लिएकी छन्।‘केही वर्ष हाम्रो सम्बन्ध राम्रै चलेको थियो तर बिस्तारै दिनहुँ रक्सीले मातेर आएर कुटपिट गर्न थाल्यो’, उनले भनिन्, ‘सम्झाउन धेरै कोसिस गरें तर अर्कीे केटीसँग लहसिएको र बानी नसुधारेक
ससुराली गएका श्रीमानलाई ढुंगैढुंगाले हानेर पत्नीले ज्यान लिइन
पाल्पा, १० वैशाख । पाल्पा जिल्लामा ढुङ्गा प्रहार गरी श्रीमतीले श्रीमानको हत्या गरेकी छिन् । रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–३ छचुवामा सोमबार ३९ वर्षीय मङ्गला कुमालले ४० वर्षीय श्रीमान् लोकबहादुर कुमाललाई ढुङ्गा प्रहार गरी हत्या गरेकी हुन् । श्रीमतीको ढुङ्गा प्रहारबाट घाइते भएका लोकबहादुरलाई उपचारका लागि मिसन अस्पताल पाल्पामा पु-याएपछि उनको मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक देवराज पौडेलले जानकारी दिए । अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका–२ घर भई ससुरालीमा आएका बखत श्रीमतीको ढुङ्गा प्रहारबाट लोकबहादुरको ज्यान गएको हो । मङ्गलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
Apr202019 by emechiNo Comments
श्रीमान १७ महिना देखि मलेसियामा, श्रीमतीको पेटमा ४ महिनाको बच्चा
सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोककी एक ३५ वर्षीया युवतीका श्रीमान १७ महिना देखि वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया छन् । तर उनको गर्भमा भने अहिले चार महिनाको शिशु छ ।घर नजिकैको देवर नाता पर्नेसंगको सम्बन्धवाट गर्भ रहे पछि उनी अहिले न घरको न घाटको भएकी छन् । गर्भ रहेको परिवारका सदस्यले थाहा पाएपछि मलेसिया रहेका श्रीमानलाई पनि सो कुरा थाहा भयो ।श्रीमानले फोन गरेर अब आफ्नो घरमा नबस्न भने । उता गर्भ बोकाएर लामो समय देखि शारिरीक सम्पर्क राख्दै आएका देवर फरार भए । चार महिनाको गर्भ बोकेर ३५ वर्षीया महिलाको बिचल्ली भएको छ। एक छोरा र चार छोरीलाई श्रीमतीको जिम्मा लगाएर मलेसिया गएका श्रीमानको झन बेहाल भएको छ । उनी परिवारलाई सुख दिन पांच छोरा छोरी र श्रीमतीलाई छोडेर विदेश हानिएका थिए । जेठी छोरी अहिले कक्षामा ८ मा पढ्ने भएकी छन् । छोरा सानो दुई वर्षको मात्र छ । उ आमा बिना एक छिन पनि बस्न सक्दैन ।
Apr192019 by emechiNo Comments
१२ वर्ष हुँदा छोरी सुटुक्क भागी अहिले ज्वाइले टाउँकोमा बन्चरो हानेर भगवानको प्यारो बनाइदिए, भिडियोमा हेर्नुहोस आमाको विलौना
कपिलबस्तुको शिवराज नगरपालिका १ बन्कस्बासका ४० बर्षीय बसन्त परियारले आफ्नी श्रीमती सुमित्रा परियारको हत्या गरेको घट्ना कार्तिक ११ गते सार्वजनिक भएको थियो। रक्सि खाएर आएका बसन्तले बन्चरोले श्रीमतीको टाउँकोमा प्रहार गरी हत्या गरेका हुन्।अहिले घट्ना घटेको ७ महिना वितिसकेको छ। मृतककी आमाको आँखा छोरीको सम्झनामा रसाई नै रहन्छ। मृतक सुमित्राले १२ वर्ष हुँदा सुटुक्क प्रेम विवाह गरेकी थिइन। उनको आमा अनुसार, सुमित्रालाई सुतेकै अबस्थामा बन्चरोले टाउँको मा प्रहार गरेका थिए। सुमित्राका श्रीमानले श्रीमतीको हत्या गरी ढोका थुनेर भागेका थिए। मृतक सुमित्राकी आमा गह भरी आँशु बोक्दै भन्छिन, ‘छोरा छोरीको माया जन्म दिनेलाई थाहाँ हुन्छ। ज्वाइले सधै दिन रात रक्सिले मातेर आउने गर्थे। कमाएको एक रुपैया सन्तान श्रीमतीलाई दिदैन थिए।’ अभियुक्त बसन्त परियारका तीन सन्तान छन्। आमाको मृत्यु भएपछि बाबु जेलमा छन् भन